Enweela batrị Redmi na batrị 5000 mAh buru ibu: mmalite ya na-echere | Gam akporosis
Enyerela Redmi na batrị 5000 mAh buru ibu: mmalite ya na-echere
Oge gara aga anyị na-ekwu maka ya a Huawei ọnụ nke gara ije site na nyocha TENAA. Nke a pụtara na arụmọrụ dị ala, yabụ a na-atụ anya na a ga-ebuputa ya na ọnụ ala dị ọnụ ala nke nwere ike inye asọmpi siri ike na igwe ikuku dị ala. Ugbu a, ekwentị mkpanaaka apụtawo, ma ọ bụghị site na Huawei, mana site na Redmi.
A na - edebanye ama ama edebanye aha oge a na TENAA nchekwa data nke Redmi ufọt ufọt, maka njirimara na njirimara teknụzụ nke egosiri ya, na ndị a bụ nkọwa zuru ezu n'okpuru.
Redmi M1908C3IC abụwo ihe atụ nke TENAA kwadoro. Nke a, dịka ndepụta ekpughere n'oge na-adịbeghị anya, nwere ihuenyo diagonal 6.2-inch, nke nwere cutout (notch) n'ụdị ndapụ mmiri. Mkpebi nke a akọwabeghị nkọwa, mana, dabere na njirimara ndị na-esonụ nke ọnụ anyị na-ekwu maka ya ma emechaa, anyị kwenyere na ọ bụ FullHD +.
Redmi M1908C3IC na TENAA
Ngwaọrụ na-abịa na octa-core processor 2.0 GHz. Ejikọtara chipset a na 2, 3, ma ọ bụ 4 GB nke RAM na 16, 32, na 64 GB nke ebe nchekwa dị n'ime, n'otu n'otu. Ya mere, a ga-enye ya n'ụdị atọ. Enwere ike ịgbasa ohere nchekwa dị n'ime ya site na iji kaadi microSD nke ruru 512 GB.
Redmi Rịba ama 8 dị n'ụzọ ya: ekwenyelarịrị 3C
Redmi a na - abịa na a Igwefoto azụ nke 12 MP na igwefoto nke abụọ na-enweghị nkọwa. E gosipụtara igwefoto n'ihu: ọ bụ 8 megapixels nke mkpebi. Ọ na-arụkwa gam akporo achịcha OS ma na-eburu nnukwu batrị ikike 5,000 mAh na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ọsọ ọsọ, nke bụ nnukwu ihe osise ya. N'aka nke ọzọ, ọ ga-adị na oji, ọbara ọbara, acha anụnụ anụnụ, pink, ọcha, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo odo na isi awọ, tụọ gram 190 wee tụọ 156.3 x 75,4 x 9,4 mm.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Enyerela Redmi na batrị 5000 mAh buru ibu: mmalite ya na-echere
Vivo kwadoro batrị 4500 mAh nke iQOO Pro 5G ga-enwe
Huawei a di omimi bu ihe n’ezo efu di ala